Shirkada baabuurta militariga samaysa Oshkosh ee Maraykanka oo baabuur dagaal ka iibinaysa dalalka Ciraaq iyo Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldShirkada baabuurta militariga samaysa Oshkosh ee Maraykanka oo baabuur dagaal ka iibinaysa dalalka Ciraaq iyo Soomaaliya
September 24, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Shirkada Maraykanka ah ee Oshkosh oo soo-saarta baabuurta ciidamada militariga.
Washington-(Puntland Mirror) Shirkada difaaca Oshkosh ayaa ka heshay in ka badan saddex meelood oo hal bilyan oo dollar ah oo heshiis baabuur militari oo ka badan 1,500 looga gadayo dalalka Cameroon, Ciraaq iyo Soomaaliya, sida ay sheegtay waaxda difaaca Maraykanka.
“Shirkada Oskosh waxay heshay $378.1 milyan… oo ah heshiis lagu iibinayo baabuurta dagaalka,” sidaa ayaa lagu yiri bayaan shalay oo Jimce ahayd.
Shaqada ayaa waxaa fulinaya Oshkosh iyadoo la qiyaasayo in la dhameeyo 31 bisha July ee sanadka 2018, sida ay sheegtay waaxda difaaca Maraykanka.
Shirkada Oshkosh ayaa ah shirkad Maraykan ah oo qaabaysa soona-saarta baabuurta militariga iyo kuwa dadka.
August 17, 2016 Madaxweyne ku-xigeenka Koonfurta Suudaan oo ku eedeeyay Riek Machar inuu daahinayo heshiiska nabada
November 25, 2016 Ugu yaraan 31 qof oo ku dhimatay shil tareen oo ka dhacay gobolka Semnan ee waqooyiga dalka Iran
Nin qori ku hubaysan oo afar qof toogasho ku dilay xarun dukumaaysi oo kutaala magaalada Seattle ee Maraykanka